ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှ ရွှေသဇင် အထည်ချုပ် အလုပ်သမားများ စုပေါင်းတောင်းဆိုမှု နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း? - Yangon Media Group
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှ ရွှေသဇင် အထည်ချုပ် အလုပ်သမားများ စုပေါင်းတောင်းဆိုမှု နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း?
ရွှေပြည်သာ၊ မေ ၂၁
ရွှေသဇင်အထည်ချုပ်အလုပ်သမားများစုပေါင်းတောင်းဆိုမှုများကို မေ ၂၁ ရက်နေ့လယ်ပိုင်းက နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှုအဆင်ပြေခဲ့၍ စာချုပ်ချုပ်ဆို ပြေငြိမ်းသွားကြောင်း အလုပ်သမားများထံမှ သိရသည်။ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် စက်မှုဇုန်(၁)ရှိ ရွှေသဇင်ဟု အများခေါ်ဆိုသော Supreme Asia Garment အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် ဒေးကြေး ကျပ် ၄၈ဝဝ ပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း တိကက်ကြေးများ တစ်ဝက်လျှော့ချ ပေးချေမည်ဆို၍ ယခင်အတိုင်းပြန်ပေးရန် စက်ချုပ်အလုပ်သမား ၇ဝဝ ကျော်တို့က အလုပ်သမားများ လုပ်ငန်းခွင်မဝင်ဘဲ စက်ရုံးဝင်းရှေ့တွင် မေ ၁၉ ရက် နံနက်ပိုင်းကစပြီး ဆန္ဒပြစုပေါင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြရာ မေ ၂၁ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ညှိနှိုင်းမှုများပြေလည်သွား၍ နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆို ပြေငြိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အနည်းဆုံး အခကြေးငွေဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီမှ မေ ၁၄ ရက်က တစ်ရက်လုပ်ခကျပ် ၄၈ဝဝ သတ်မှတ်ကြေညာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ရွှေသဇင်အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ လုပ်ငန်းရှင်ဘက်မှ အသစ်သတ်မှတ်လိုက်သည့် ကျပ် ၄၈ဝဝ အား တိုးပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် ယခင်ပေးနေကျနှုန်းထား အထည်ကြေးများအား ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း (တစ်ဝက်)လျှော့ချမည်ဟု ပြောဆိုလာ၍ စက်ချုပ်အလုပ်သမားများက မကျေမနပ် ဖြစ်ကာ မေ ၁၉ ရက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ချိန် နံနက် ၈ နာရီမှ စပြီး စက်ရုံတွင်းလုပ်ငန်း ခွင်သို့မဝင်ဘဲ ယခင်နှုန်းထားများအတိုင်း ပေးရန် စက်ရုံရှေ့ဝင်းအတွင်း၌ မေ ၁၉ရက် မှစ၍ စက်ချုပ်အလုပ်သမား ၈ဝဝ ကျော်တို့က စုပေါင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း အထည်ကြေးလျှော့မယ့်ဟာ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲလျှော့ဖို့ သဘောတူဖြစ်ကြပါတယ်။ အခု စုပေါင်းတောင်းဆို ကြတဲ့ ၁၉ ရက် နဲ့ ၂၁ ရက်အတွက် လစာမဖြတ်ဖို့လည်း သဘောတူတယ်”ဟု ယင်းစက်ရုံမှအထည်ချုပ် အလုပ်သမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယင်းအပြင် နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ်တွင် ယူနီဖောင်းကြေးနှင့် ID ကတ်ကြေးများကို စက်ရုံဘက်မှ ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုဘဲ အလုပ်ရှင်မှ အခမဲ့ထုတ်ပေးရန်၊ စက်ရုံတွင်း လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကို အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားနှစ်ဖက်မှ ဥပဒေ နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန်တို့ကိုလည်း သဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်း အလုပ်သမားများထံမှ သိရသည်။ စက်ရုံတွင်း ညှိနှိုင်းမှုအား မေ ၁၉ ရက်က နံနက် ၈ နာရီမှစ၍ ပြုလုပ်ခဲ့ကာ ၉ နာရီခွဲအချိန်တွင် အလုပ်သမားများဘက်သို့ လုပ်ငန်းရှင်ဘက်မှ တိကတ်ကြေးအား ၅ဝ ခိုင်နှုန်းလျှော့ချခြင်းမှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ပြောင်းလဲပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သို့သော်ပြေလည်မှုမရှိဘဲ ဆက်လက်ညှိ နှိုင်းရာ ၁၁ နာရီခွဲခန့်တွင် လုပ်ငန်းရှင်ဘက်မှ တိကတ်ကြေးများအား ယခင်အတိုင်းပြန် ပေးမည်။ သို့သော် အထည်ကိုချပေးသည့်အတိုင်း ကုန်စင်အောင်ချုပ်ပေးရန် ပြောဆိုလာ၍ ညှိနှိုင်းမှုအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရပြန်သည်။ ယင်းနောက် လုပ်ငန်းရှင်ဘက်မှ နေ့ တစ်ပိုင်း အလုပ်ပိတ်ပေးကာ တနင်္လာနေ့တွင် ထပ်မံညှိနှိုင်းရန်ချိန်းဆိုခဲ့ကြပြီး မေ ၂၁ ရက် အလုပ်သမား ၈ဝဝ ကျော်တို့ စက်ရုံရှေ့တွင် စုရုံးထိုင်နေကြပြီး အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးဦးစီးမှူးထံစာဖြင့် တင်ပြကာအလုပ်ရှင်ဘက် မန်နေဂျာနှင့် ထပ်မံညှိနှိုင်းခဲ့ကြရာမှ ပြေလည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”သမီးတို့ဘက်က တောင်းဆိုမှုတွေကတော့ တိကတ်ကြေးများကို မိမိလုပ်သ လောက်အပြည့်အဝပေးရန် စသည်ဖြင့် ကိုးချက်လောက်ရှိတယ်။ အဲဒီအထဲက ငါးချက်သဘောတူပေးလိုက်တာပါ။ ကျန်တာ တွေက စာထုတ်ပြီးညွှန်ကြားပေးမယ်ပြောပါတယ်”ဟု အလုပ်သမားတစ်ဦးကပြောသည်။ ”သူတို့ဟာ သူတို့စက်ရုံအဆင့်မှာပဲ ပြေလည်သွားပြီး စာချုပ်ချုပ်ဖြစ်ကြတာပါ။ တိကတ်ကြေးကို တစ်ရာရာခိုင်နှုန်းတော့ မဟုတ်ဘူး။ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းပြန်ပေးမယ်ပေါ့။ ကျန်တာတွေလည်း အဆင်ပြေသွားပါတယ်” ဟု ရွှေပြည်သာမြို့နယ်အလုပ်သမား ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးမှူး ဦးသိန်းမင်းထွန်းကပြောသည်။ ညှိနှိုင်းမှုအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်၍ စုပေါင်းတောင်းဆိုနေကြသည့် အလုပ်သမားများသည် မေ ၂၂ ရက်တွင် လုပ်ငန်းခွင် ပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်စာရင်း ထွက်ရှိမည့်ရက် အတည်မပြုနိုင်သေးဟု ပညာရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးေ?
ဆိုရှယ်မီဒီယာ စောင့်ကြည့်အဖွဲ့သည် ပြည်သူများကို စောင့်ကြည့်ရန် မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတော်နှင့်ြ
”မိသားစုဒရာမာ ဇာတ်လမ်း အမျိုးအစားဖြစ်သော Box No.88 ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ယခုလအတွင်း ရိုက်ကူးမည်”
လျှပ်စစ်မီတာခ ဈေးနှုန်းတက်သဖြင့် ရေမီတာများဖြင့်အသုံးပြုသူများ ရေအလေအလွင့် မရှိစေရေး ချောက်မြို့စည်ပင်မှ ဆောင်ရွက်နေ
Dior ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲမှ ဒေါသတကြီး ထွက်ခွာလာခဲ့သော ပဲရစ်ဂျက်ဆင်
အောင်လံမြို့အတွင်း ကျန်ရှိနေသော လယ်ယာမြေ ဧက ၆ဝဝဝ ကျော်အား ပုံစံ (၇) များ လစဉ်ထုတ်ပေးရန် စီမံ??